Wun Zinn - Myanmar Book 5.0.7 APK | AndroidAppsAPK.co
5.0.7 ․2weeks ago
Free ․ Bagan Innovation Technology ⇣ Download APK (12.52 MB)
What's Wun Zinn - Myanmar Book APK?
Wun Zinn - Myanmar Book isaapp for Android, It's developed by Bagan Innovation Technology author.
This app has 2.9M download times on Google play and rated as 4.48 stars with 18,134 rated times.
This product is an app in Books & Reference category. More infomartion of Wun Zinn - Myanmar Book on google play
မိမိ လက်ထဲတွင် မိုဘိုင်းဖုန်း ရှိရုံဖြင့် စာရေးဆရာ (၆၀၀) ကျော်တို့၏ စာပေ အမျိုးအစား စုံလင်သော စာအုပ်ပေါင်း (၇,၀၀၀) ကျော်ကို ငွေကျပ် (၅၀) ကျပ်ဖြင့် စတင် ဖတ်ရှုနိုင်သည့် ဖုန်း အက်ပလီကေးရှင်း တစ်ခုဖြစ်္ကပီး စာအုပ် ဝယ်ယူခြင်းနှင့် ငှားရမ်းခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ စာအုပ် ငှားဖတ်ရာ၌ တစ်ရက်လျှက် (၃၇.၅) ကျပ်နှုန်းဖြင့် တစ်ကြိမ်ငှားပါက လေးအုပ် ဖတ်ရှုနိုင်္ကပီး နှစ်ပတ်တစ်ကြိမ် ငွေကောက်ခံသည့် စနစ် ဖြစ်သည်။ မြန်မာကာတွန်း ရုပ်ပြစာအုပ်များကိုလည်း ဖတ်ရှုနိုင်သည့် အပြင် အသံထွက်စာအုပ်ပေါင်း (၆၀၀) ကျော် ရှ္ကိပီး ကဏ္ဍစုံ မဂ္ဂဇင်းများ၊ သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်နှင့် အသစ် ထပ်မံ ထည့်သွင်းထားသော အခန်းဆက်ဝတ္ထုများ ကိုလည်း အလွယ်တကူ ရှာဖွေ ဖတ်ရှုနိုင်သည်။ စာအုပ် ဖတ်ရာ၌ PDF ပုံစံအပြင် စာအုပ် ကိုင်ဖတ်ရသည့် ခံစားချက်မျိုး ရရှိစေမည့် E-pub Reader စနစ်ကိုလည်း ဝန်ဆောင်မှု ပေးထားသည်။ ထို့ပြင် အိမ်မှာ နေရင်း စာအုပ် (Physical Book) မှာယူနိုင်မည့် နည်းစနစ်ကိုလည်း Wun Zinn to Home စာအုပ် အိမ်အရောက်ပို့ ဝန်ဆောင်မှုဖြင့် ချိတ်ဆက်္ကပီး အက်ပလီကေးရှင်းထဲတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ထို့ကြေင့် ဘယ်အချိန် ဘယ်နေရာမှာ ဖြစ်ဖြစ် မိမိ ဖတ်ချင်လိုသည့် စာအုပ်မျိုးစုံကို ရရှိနိုင်သည်မှာ ဝန်ဇင်း တစ်ခုတည်းပင် ရှိသည်။ မိုဘိုင်းဖုန်း ရှိသူတိုင်း စာဖတ်နိုင်ရန် ဝန်ဇင်းမှ ဝန်ဆောင်မှု ပေးလျက် ရှိပါသည်။
✩ 4.3 · v5.7.4
✩ 3.8 · v2.90
Jackpot Scratcher-Win Real
✩ 4.3 · v1.6.26682
✩ 4.0 · v56
✩ 0.0 · v1.7.16
Rádio Studio Trindade FM